१ हजार ७ सय ९६ को नमूना परीक्षण, कर्णालीमा संक्रमित छैनन् – HostKhabar ::
१ हजार ७ सय ९६ को नमूना परीक्षण, कर्णालीमा संक्रमित छैनन्
सुर्खेत : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अहिले सम्म देशभर १ हजार ७ सय ९६ जनाको नमूना परिक्षण गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले गर्ने नियमित कोरोना ब्रिफिङ क्रममा प्रवक्ता डा. देवकोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ९९ जनाको नमूना परीक्षण भएकोमा नयाँ संक्रमित फेला नपरेको उनले बताए ।
यसअघि सोमबार १ हजार ६ सय ९७ जनाको नमूना परीक्षण भएको थियो । कोरोना आशंकामा ९ हजार बढी क्वारेन्टाइनमा रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोनाको आशंकामा काठमाडौं उपत्यकामा १६ र उपत्यका बाहिर ८४ जना आईसोलेसनमा भर्ना भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले बताए। कञ्चनपुरमा २१ र कैलालीमा १८ नमूना परीक्षणका लागि संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र हुँदै आएको परीक्षण अहिले काठमाडौं बाहिरका ९ स्थानमा पनि सुरु भइसकेको छ। उनका अनुसार हालसम्म कन्ट्याक ट्रेसिङको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ।
यसैबीच, कर्णालीमा मंगलबार बेलुकासम्म ५६ नमुना परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये कसैलाई पनि संक्रमण नदेखिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रिता भण्डारीले जानकारी दिइन्।
अहिले काठमाडौं बाहिरका ९ ठाउँमा कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ । प्रदेश १ अन्तर्गत सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ अन्तर्गत जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, बागमती अन्तर्गत काठमाडौं, चितवन, मकवानपुर र काभ्रे गरी चार स्थानमा स्वाव परिक्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश अस्पताल, प्रदेश ५ को प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कर्णालीको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सेती प्रादेसिक अस्पताल धनगढीमा कोरोना संक्रमणको आशंकामा स्वाव परिक्षण दैनिक हुने गरेको छ ।